ကလေး ဦးဆောင်နို့ဖြတ်နည်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို စတင်သင့်လဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Family ကလေး ဦးဆောင်နို့ဖြတ်နည်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို စတင်သင့်လဲ?
ကလေး ဦးဆောင်နို့ဖြတ်နည်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို စတင်သင့်လဲ?
ကလေး-ဦးဆောင်နို့ဖြတ်နည်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို စတင်သင့်လဲ?
မိခင်တိုင်းဟာ ဘေဘီလေးတွေကို မွေးစကနေ ၆လအထိကို မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းကို တိုက်ကျွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးခြောက်လကျော်လာရင် မိခင်နို့အပြင် ဖြည့်စွက်အာဟာရတွေ၊ အနှစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသားတွေကို တွဲကျွေးလို့ရပါပြီ။ မိခင်အတော်များများက ကလေးအသက် ၁နှစ်ခွဲကျော်မှ နို့ဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးနို့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာ နည်းစနစ်တွေနဲ့ နည်းလမ် အတော်များများရှိပါတယ်။ မိခင်အများစုက ကလေးနို့မစို့အောင် မိခင်ရင်သားမှာ အခါးအရသာတစ်ခုခု သုတ်လိမ်းတဲ့နည်းကို သုံးကြပါတယ်။ ကလေးဦးဆောင်တဲ့ နို့ဖြတ်နည်းကတော့ လူကြိုက်အများဆုံးထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
BLW လို့သိကြတဲ့ ကလေးဦးဆောင်တဲ့ နို့ဖြတ်နည်းက ကလေးအစားအသောက်ထဲကို (solid food) အစာမာတွေ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းတဲ့ ဖြည့်စွက်စာတိုက်ကျွေးခြင်း နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမိခင်နို့တိုက်ရင်း ဖြည့်စွက်စာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးဟာ ဖြည့်စွက်စာစားဖို့ ကျင့်သားရလာပြီး တဖြည်းဖြည်း နို့ပြတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အာဟာရဗေဒပညာရှင် Gill Rapley က ဒီနည်းစနစ်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ” Helping Your Baby to Love Good Food”ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ သူမအိုင်ဒီယာကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ကလေးဦးဆောင်တဲ့ နို့ဖြတ်နည်းက အစားအစာကို အနှစ်ပြုလုပ်ပြီး မိခင်ကဇွန်းနဲ့ ခွံကျွေးတဲ့အဆင့် မဟုတ်ဘဲ ကလေး သူ့ဘာသာသူ ကိုင်စားနိုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက များသေားအားဖြင့် ကလေး ကိုယ့်ဘာသာ စားတတ်အောင် သင်ပေးတဲ့ teaching method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
BLW မှတဆင့် အစားအစာအသစ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အနံ့၊ အရောင်နဲ့ အရသာတွေကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရင်းနဲ့ ကလေးကို မိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို သူတို့အမြင်အာရုံကတဆင့် အစားအစာ စူးစမ်းရှာဖွေဖို့အပြင် ကိုယ့်ဘာသာ အစာစားဖို့ လွတ်လပ်မှုကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဘာသာလက်နှင့် စားနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးတွေဟာ ကျွမ်းကျင်စွာ ဝါးနိုင်ပြီး မျက်စိ-လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း skills ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ကြိုက်တာနဲ့ မကြိုက်တာကို ရှာဖွေတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစားအစာသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို အသက် ၆လပြည့်ပြီးနောက် စတင်ရပါမယ်။ အသက် ၆လမပြည့်ခင်ကာလမှာ မိခင်နို့သာ သီးသန့်တိုက်ဖို့ WHO ကအကြံပြုထားပါတယ်။
ကလေးဦးဆောင်တဲ့ နို့ဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုကျင့်သုံးမလဲ?
ဒီနည်းစနစ်စဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ကလေးဟာ အသက် ၆လသို့မဟုတ် ၆လအထက်ဖြစ်ပြီး လုံးဝကျန်းမာနေရပါမယ်။
(၂) ကလေးဟာ အကူအညီမပါဘဲ မတ်မတ်ထိုင်နေနိုင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်နေရပါမယ်။
(၃) ကလေးဟာ ဖြည့်စွက်စာကို စားဖို့ စိတ်ဝင်စားနေရပါမယ်။ လူကြီးတစ်ခုခုစားတာတွေ့ရင် ပါးစပ်လိုက်ဟတာ၊ အစားအစာတွေ့ရင် အတင်းဆွဲတာမျိုးက သူတို့စားချင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ကလေးဟာ မထွေးထုတ်ဘဲ သူတို့ပါးစပ်ထဲမှာ အစားအစာကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ပြီးစားရမလဲဆိုတာ သိနေပြီဆိုရင် ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးလို့ရပါပြီ။
သင့်ကလေးက ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေ ပြပါက ကလေးဦးဆောင်တဲ့ နို့ဖြတ်ခြင်း စတင်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဒီအစားအစာတွေ ကျွေးတဲ့အခါ မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာ သင့်ကလေးကို ပါဝင်စေပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေးဟာ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ မိဘတွေကို စောင့်ကြည့်အတုယူခြင်းဖြင့် စောစောသင်ယူတတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ကလေးအစာနင်မှာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ မိဘက ကလေးအစာစားနေရင် စောင့်ကြည့်နေတာ၊ ကလေးဝါးနိုင်၊ မျိုချနိုင်မယ့် အစားအစာပျော့ပျော့လေး ပြုလုပ်ပေးတာက ကလေးအတွက် ဘေးကင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအရာက သင့်ကလေး သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ အစာစားဖို့ သင်ယူလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အစာစားနေချိန်မှာ ကလေးရဲ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားက တည်ငြိမ်နေသင့်ပြီး သူရဲ့လက်တွေနှင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယူစားလို့ရမယ့်နေရာ ဖြစ်နေရပါမယ်။ ကလေးကို စားပွဲရှေ့မှာ၊ ကလေးထိုင်ခုံပေါ်မှာ ၊ သင့်ပေါင်ပေါ်မှာ သို့မဟုတ် သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုမှာ မတ်မတ် ထိုင်ပေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကလေးကို ပါးစပ်ထဲ အတင်းထည့်ပေးတာ မလုပ်ပါနဲ့။ သူတို့ဘာသာ သူတို့ ယူစားပါစေ။
ကလေးဦးဆောင် နို့ဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုစတင်မလဲ?
သင့်ကလေးအလွယ်တကူ ယူလို့ရနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ စတင်သင့်ပါတယ်။ ပျော့တဲ့ အစားအစာတွေပေးတဲ့အခါ ကလေးစုပ်နိုင်၊ ဝါးနိုင်တဲ့ အပိုင်းကြီးကြီးကို ပေးပါ။ အစားအစာကို ခြေပြီးလည်း ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဓါတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်ဖို့နှင့် ကလေးရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာစေဖို့ တစ်ကြိမ်မှာ အစားအစာတစ်မျိုးတည်းသာ ကျွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တဖန် ကလေး အသက်တစ်နှစ်အထိ အာဟာရ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ မိခင်နို့တိုက်ခြင်းကိုလည်း မရပ်တန့်သင့်ပါဘူး။ သင့်ကလေးက ဖြည့်စွက်စာတွေကို ကြာရှည်မစားချင်တဲ့အခါ မိခင်နို့တတိုက်ကျွေးခြင်းက လိုအပ်တဲ့ အာဟာရများကို ပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်။
ဖြည့်စွက်စာကျွေးတဲ့အချိန်ဟာ ကလေးတွေအတွက် ပျော်စရာအချိန်ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ပထမတော့ သူတို့နည်းနည်းပဲစားပြီး အစားအစာတွေကို ကစားပါလိမ့်မယ်။ မစားလို့ဆိုပြီးတော့ အတင်းမကျွေးပါနဲ့နော်။ သူတို့မစားချင်တဲ့အချိန် အတင်းကျွေးတာဟာ စားချင်စိတ်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။ သံဓါတ်ချို့တဲ့မှုက အဖြစ်မများပေမယ့်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ် သံဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများကို သင့်ကလေးကို ကျွေးပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို ဘာတွေ မကျွေးသင့်ဘူးလဲ?
သင့်ကလေးကို ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာအမျိုးမျိုး ကျွေးနိုင်ပေမယ့် ကလေးကို မကျွေးသင့်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာနဲ့ အစားအစာတချို့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ
ကလေးရဲ့ကျောက်ကပ်က လက်ခံဖို့ အရမ်းသေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဆား၊ ပျားရည်နဲ့ သကြားတို့ကို မကျွေးသင့်သေးပါဘူး။
ဟင်းနုနွယ် နှင့် chardsရွက်ကဲ့သို့သော အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ နိုက်ထရိတ်အဆင့် မြင့်မားစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ၁နှစ်အောက်ကလေးကို ကျွေးဖို့ အကြံမပြုပါဘူး။
ပင်လယ်စာ၊ ငါးကြီးတွေ၊ ပင်လယ်ရေညှိ၊ ဆန်အချိုရည်၊ အသင့်စား အစားအစာတွေက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးအာဟာရ တန်ဖိုးတွေကို မပေးပါဘူး။
ကလေး လည်ချောင်းနင်တာတို့ အသက်ရှုကြပ်တာတို့ ဖြစ်စေတာကြောင့် အစေ့အဆန်တွေ၊ ပဲတွေ၊ အခွံမာသီးတွေ ကျွေးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ အစေ့အဆန်ဆိုရင် ကြိတ်ချေတာ သို့မဟုတ် အနှစ်လုပ်ပြီးမှ ကျွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှ ကလေးကို အစားအစာအသစ်တွေ တဖြည်းဖြည်းချင်း မိတ်ဆက်ပေးပါ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကလေးကို ဖြည့်စွက်စွာ ကျွေးခြင်းက ဒီနည်းစနစ်ရဲ့ အောင်မြင်မှု သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဖြည့်စွက်စာကို နှစ်သက်စွာ စားသုံးလာခြင်းက မိဘတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ ဖန်တီးမှုပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
Previous articleလက္ထက္ဖို႔ ရက္ပိုင္းအလိုမွ တန္းဖိုးမရွိတဲ့ ဂိမ္းစက္တစ္ခုေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ သတိုသားေလာင္း
Next articleအသားအေရ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကိုမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမဲ့ အျပဳအမူ အက်င့္စ႐ိုက္အခ်ိဳ႕
General Knowledge April 11, 2019
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို ငြီးငွေ့နေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀) ချက်
ကလေးတွေ ကျန်းမာရေးအတွက် အာရှနိုင်ငံတစ်ချို့မှာ ကျင့်သုံးတဲ့ နည်းလမ်းများ
General Knowledge April 10, 2019